मलाई बढी यौन उत्तेजना छ तर मन लागेर क्यार्नु?श्रीमानले जाँगर नचलाएपछि ? « News of Nepal
मलाई बढी यौन उत्तेजना छ तर मन लागेर क्यार्नु?श्रीमानले जाँगर नचलाएपछि ?
तपाईंको श्रीमान्मा यौन निष्क्रियता सम्बन्धी कुनै समस्या पनि हुन सक्छ। त्यसका लागि चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईंको यौन चाहना सधैं बढी भएको हो भने पनि त्यो अस्वाभाविक चाहिँ होइन। खासमा यौन क्रियाकलाप कति पटक भयो भन्नुभन्दा कति गुणस्तरीय भयो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। जहाँसम्म यौन चाहना घटीबेसीको प्रश्न छ, हरेक व्यक्तिको यौन इच्छा फरक-फरक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक हुन्छ। कोही दैनिक यौन चाहन्छन् भने कोही महिनामा एक-दुई पटक। तपाईंहरू दुवैले कहिलेकाहीँ हुने र सधैं हुनेलाई ठूलो समस्या वा स्वस्थ नभएको रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। त्यसकारण तपाईको पार्टनरमा कुनै खराबी छ भनेर सोच्नु भन्दा तपाईहरू दुवैको यौन इच्छा फरक छ भनेर बुझ्नु तथा कसरी एकअर्काको यौन चाहनालाई सम्मान दिने भनेर सोच्नु उचित हुन्छ। तपाईंहरूले एकअर्कालाई दोष लगाउँदा थप समस्या सिर्जना हुनसक्छ र सम्बन्ध अझ जटिल बन्दै जान्छ। आफ्नो पार्टनर जसको यौन इच्छा कम छ उसलाई दबाब दिनुभन्दा एकअर्कालाई बढावा दिन आवश्यक हुन्छ। दुई जनाबीचको यौन चाहनालाई लिएर भावना साटासाट वा भावना सञ्चार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आफू आकर्षक बन्ने, परिवेश यौनमय बनाउने, हंसीमजाक गर्ने, यौनअंगहरूलाई उत्तेजित मुडमा सुम्सुम्याउने, गुणस्तरीय लुबि्रकेन्टस प्रयोग गर्ने, एक अर्काको शरीर एवं भावना बुझ्ने प्रयास गर्ने। श्रीमान्लाई आफ्नो उनको शरीर दिनमा एकपटक नजिकबाट नियाल्न लगाउनु पनि यौन उत्तेजना बढाउन सहायक हुन्छ